I-turinabol yomlomo yompu: Ngaba uyazi amaqiniso malunga ne powder steroid?
/Blog/I-turinabol yomlomo/I-turinabol yomlomo yompu: Ngaba uyazi amaqiniso malunga ne powder steroid?
ezaposwa ngomhla 12 / 17 / 2017 by 阿斯劳 bha liweyo I-turinabol yomlomo. Ibe 1 Comment.
1.Yintoni i-Oral Turinabol? I-2.Imbali ye-turinabol yompopho
3.Yintoni i-Oral turinabol powder? 4.Yintoni eqhelekileyo evela kwi-Oral turinabol powder?
I-5.I-Oral turinabol isebenza njani? I-6.Izibonelelo ze-turinabol yomlomo ukuze kwakhiwe umzimba
7.Ziziphi iingenelo ze-turinabol yomlomo? 8. I-turinabol yomlomo kunye ne-turinabol ejoyiweyo ekwakheni umzimba
I-9.I-turinabol yoLuntu kunye noLawulo 10.Kwazisa umlinganiselo we-turinabol yomlomo
I-11.Medical dosage ye-turinabol yomlomo I-12.Ingxaki ye-turinabol yomlomo yokwakha umzimba
I-13.I-Turinabol yaseOral kubomfazi?
I-turinabol yomlomo ekhompyutheni ekhulayo
I-turinabol yomlomo Abalinganiswa basisiseko
igama: I-turinabol yomlomo
umbala: Ubumhlophe obumhlophe
Yintoni i-Oral Turinabol?
Oral Turinabol(I-chlorodehydromethyltestosterone, eyaziwa nangokuthi 'iTbol' kunye neTurinabol), ingeyochungechunge lwe testosterone abanxibe impahla(owaziwayo owaziwayo enonthate ye testosterone ), ngokwenene ifomu eguqulelwe i-Dianabol (IMethandrostenolone), apho ngokwenene kubandakanywa izakhiwo zeekhemikhali ze-Dianabol kunye Clostebol (4-chlorotestosterone). Ngenxa yoko le nto ke igama eliyinyani likamachiza yi-4-chlorodehydromethyltestosterone. Ukuguqulwa kwendlela yamakhemikhali eyenza ukuba kube yinto engenakunambitheka kwaye ibe neqondo eliphantsi kakhulu le-androgenic, mhlawumbi isizathu sokuba iTurinabol ibizwe ngegama elithi "Dianabol".
I-Oral Turinabol (OT) ifana kakhulu kwisakhiwo kwi-methandrostenolone. Ukwahlukana koko, kwinyani, ukudibanisa kwe-athari ye-chloride kwisikhundla se-C-4. I-Oral-turinabol idume ngokuba yinto enhle kakhulu ye-steroid. Ukongezwa kwe-athari ye-chloride kususa amandla okuncedisa ngokunqanda ukufikelela nge-aromatase kwaye kunciphisa ukuguqulwa kwi-DHT. Ulwahlulo oluphambili kukuba i-OT inokwenzeka ukuba inomdla obuninzi obunokubambisana kwayo kunye ne-Oral Turinabol ibonakala ibe ne-SHBG ephezulu kune-methandrostenolone engabangela ukuba i-testosterone ne-estrogen iqhutywe kwi-circulation.
Imbali yomlomo we-turinabol powder
I-Oral Turinabol yaqala ukukhutshwa nguJenapharm ngaphandle kweMpuma Jamani kwi1962. I-steroid yayiya kunandipha inqanaba eliphezulu kakhulu lokhuseleko kumashumi eminyaka kungekuphela kwamadoda kodwa kwabasetyhini nasebantwaneni kunyango. Le anabolic steroid (AS) yavunywa ukuba iyasebenza kakhulu kumzamo wokwakha okanye ukukhusela ubunzima obukhulu kunye neethambo ngaphandle kweengxaki ezinzima. Nangona kunjalo, i-Oral Turinabol izakufumana ingqalelo kwihlabathi lonke kwi-1990 xa i-East German steroid ehlaselayo yaba noluntu.
Ukususela kwi-1974 ukuya kwi-1989 into eyaziwa ngokuba yi-East German Doping Machine yayiphumelele ekulawuleni i-anabolic steroids kwiimidlalo zayo ze-Olimpiki. Abazange baphathe kuphela ukukopela kodwa bebaleka njengoko i-steroids efana ne-Oral Turinabol, ngelo xesha, ayibonakaliyo. IsiCwangciso soPhando lweSizwe I-14.25 njengoko yaziwa ngokusemthethweni nayo iya kusebenzisa i-epitestosterone ngeli xesha ukuze kufundwe ukufundwa kwe testosterone ekuhlolweni kweziyobisi.
Xa i-Oral Turinabol yafunyaniswa njengenxalenye ebalulekileyo ye-East Germany i-scandal Jenapharm yayiyeka umkhiqizo kwi-1994. Kwiminyaka emibini kamva i-powerhouse powerhouse ephuma eJamani I-Schering, abenzi be-steroids ezifana ne-Primobolan, i-Testoviron kunye neProviron baza kuzuza i-Jenapharm kodwa bakhetha ukungabuyiseli i-Oral Turinabol kwimarike. Ukususela ngeli xesha i-anabolic steroid ayizange iveliswe yinyaniso ehambelana neyobisi kunye neyona nto iyenze imarike emnyama phantsi kwe-anabolic steroid.
Iyintoni i-Oral turinabol powder?
I-turinabol yomlomo eyisiqhekeza, into ebonakalayo yeziyobisi I-turinabol yomlomo, luhlobo lwe-White ukuya kwipowder, amaninzi kumthengisi weemveliso ze-aliboloc sodods ngokuqhelekileyo athengisa ucoceko oluphezulu I-turalabol yomlomo okanye i-powdered powder, okwenza kube yi-tablet ye-turinabol yomlomo. eyahlukileyo, ngokuqhelekileyo ibanga ukusuka kwi-60% -99% yobungcwele, ngexabiso elihlukile.
Iinkcukacha ze-Oral turinabol powder njengengezantsi:
Igama: iTurinabol yomlomo
Ixesha lokuqalisa: imizuzu engama-20
Yintoni eqhelekileyo evela kwi-Oral turinabol powder?
Kwimarike, kukho uhlobo oluthile lwe-turinabol yomlomo, njengeepilisi ze-turinabol zomlomo, iipilisi, kunye ne-Oral turinabol capsule. Zonke zivela kwi-Oral turinabol powder.Ungathenga kalula iipilisi ze-turinabol zomlomo kwivenkile zendawo, mhlawumbi ixabiso elincinci okanye uthenge i-turinabol yomlomo ipowder online. Kuya kuba kuhle.
I-Oral turinabol isebenza njani?
I-Tobolwork Oral njengefomu eguqulelwe i-Dianabol (iMethandrostenolone); inhlanganisela kaDi Dianabol kunye neClostebol (4-chlorotestosterone) .Njengoko isakhiwo sayo sekhemikhali jikelele sifana no-Dianabol, ihomoni enkulu kakhulu. Xa i-Tbol ibuthakathaka kunokuba i-Dianabol isinikezela ngezibonelelo ezahlukileyo, ngaphandle kwemiphumo echaphazelekayo ne-steroids eyandisa i-ostrogen. Oku kuthetha ukuba unokulindela ukujonga ngokukhawuleza, ukuba akusiyo inzuzo ehlambulukileyo yemisipha, ngaphandle kokuvalelwa nayiphi na inqabileyo, ukugcinwa kwamanzi okanye i-gynecomastia.
Ngendlela esebenza ngayo izici ze-Oral Turinabol zilula. Uninzi anabolic steroids kufuneka ibe nefuthe elihle kwiprotein yeprotheni kunye nokugcinwa kwe-nitrogen, kunye nokunyuka kwesibalo se-red cell. Ezi zimpawu zibaluleke kakhulu njengoko ziphucula umoya we-anabolic womntu. Iprotheni yangaphakathi kule protheni yintloko isakhiwo sokwakha imisipha kunye ne-synthesis ebonisa izinga apho iiseli zakha amaprotheni, kunye nokugcinwa kwe-nitrojeni ekubeni ibonisa inxalenye ebalulekileyo yokwakhiwa kweethambo.
Ukuntuleka kwitrojeni kuya kubakho kwilizwe elinamasiko, apho ixabiso eliphezulu ligcinwa liza kukhuthaza umoya ophezulu we-anabolic. Emva koko sineeseli ezibomvu zegazi, ezijongene nokuthwala i-oksijini ukuya kwigazi. Amanye amangqombela egazi obomvu aya kufana nokuxhamla igazi elongezelelweyo, eliza kulandelana nokunyamezela okukhulu. Zonke ezi mpawu ziya kuba luncedo kakhulu ngokubhekiselele kumandla omzimba wokubuyiselwa.
Iinzuzo ze-turinabol yomlomo yokwakha umzimba
Ziziphi iinzuzo ze-turinabol yomlomo yomzimba wokwakha umzimba? Masibone.
Iziphumo ngaphandle kokuzuza ubunzima (oku kuncedo kwimidlalo apho uzama ukulinganisa okanye ukuncintisana eklasini ethile yesisindo)
Izisipha ezinzima ngaphandle kokubukeka
Ukwandisa ubunzima bomzimba obunzima
Amandla okubopha ngamandla kwi-SHBG
Ukwandisa kwi-testosterone yamahhala
Le steroid yayiyinzuzo kubagijimi njengoko iholele ukwanda kwimizimba yesisipha esinyamekileyo, ngaphandle kokugcinwa kwamanzi amaninzi, okanye ngaphandle kokunyuka kwe-estrogen.
Ngelixa izibonelelo zesikhungo se-musin turinabol zingaphantsi kwamanye ama-anabolic steroids afana ne-Dianabol, uya kufumana ukuba le steroid isetyenziswe "kwizitampu" ngabazimba.
Isizathu salokhu kukuba iyakunceda ukwandisa inkululeko (esebenzayo) testosterone amanqanaba ngokubonga ngokusebenza kwi-hormone yesondo ebopha i-globulin (SHBG). Oku kunceda ukuphucula izibonelelo zenye i-steroids ezisetyenziswayo.
Ziziphi iingenelo ze-turinabol yomlomo?
Ngenxa yokwahlula okwahlukileyo kwe-Oral turinabol ngokwahlukileyo kwe-androgenic yayo kwiziphumo ze-anabolic, yinto ebuthathaka ye-anabolic steroid kunehomoni yayo yomzali uDianabol. Nangona kunjalo, isiqinisekiso ngeTbol kukuba ngayo nayiphi na into ebonakalayo yokwakha umsipha, iya kubonakala kancinci kakhulu kwindlela yeziphumo ze-androgenic kwaye akukho ziphumo ze-estrogenic (ngenxa yokungakwazi kwayo ukunambitheka kwi-Estrogen). Ngenxa yamandla ayo abuthathaka kuno-Dianabol, iidosi ezifunekayo zokufumana iziphumo ezivela kwi-Tbol zithathwa njengeziphezulu kakhulu (oku kuya kuchazwa kungekudala kwicandelo leedosi zeTbol zale profayili).
Ngokubanzi, abagijimi nabazimba bomzimba banokulindela ukuzuza okuzinzileyo kunye nekhwalithi enomgangatho ongenamngcipheko kwanoma yiyiphi i-bloating, gyno, okanye nayiphina imiphumo ye-estrogenic. Ubukhulu beMisa kunye nobutyebi abaziwa ngokuba bubangelwa ngenxa yokungabikho kwamandla a-anabolic, kodwa ukuzuza okusemgangathweni kunye nokwemgangathweni okuqhubekayo okukhula rhoqo ngokugqithisileyo kunokuba kulindeleke. Isetyenziselwa njengento efanelekileyo yokusika ngexesha lokulahlekelwa kwintlawulo okanye ukulungiswa kwangaphambili komncintiswano ngenxa yokungakwazi ukuguqula kwi-Estrogen. Amandla e-turinabol yomlomo ayakhanya ngokugqithisileyo kwezinye i-anabolic steroids xa iqhutywe (ixutywe) kunye nezinye i-anabolic steroids ngenxa yokukwazi ukubopha kwi-SHBG. Ukubophezela kwi-SHBG kuvumela ukuba ezinye ze-anabolic steroids zixutywe ukuba zifumaneke ukuba zenze umsebenzi wazo, zingenakuvinjelwa yi-SHBG, enye enye inzuzo ekubonayo.
I-turinabol yomlomo kunye ne-turinabol ejoyiweyo ekwakheni umzimba
Ukwahlukana phakathi komlomo kunye ne-injini ye-turinabol kufana nezinye ezininzi i-steroids. I-Oral kulula ukuyithatha kodwa inkolelo ingaba yingozi kwisibindi, ngoko umntu unokugcina i-dosage ephezulu ye-injectable version. Ukongezelela, injectable ifunyanwe kancinci. Kodwa, ngokubanzi, le nto yinto yokukhetha.
In abanxibe impahla i-turinabol ingabizwa ngokuba yi-rookie. Akumangalisi - kwixesha elidlulileyo "inkosi yamachiza" eMpuma yeYurophu yayisetyenziselwa i-methandrostenolone (dianabol) engancinci. Zonke i-turinabol ezithengiswa ngeSymenti zaseYurophu zazingeniswa ngabaqeqeshi bezemidlalo. IYurophu yaseYurophu kunye neU.SA bengazange bayakwazi ukuba loo mveliso ikhona, ubuncinane akukho nabakhi bomzimba babika ukuba bayisebenzise. Isimo sitshintshile kungekudala xa lesi sidakamizwa esiluncedo sinikezelwe ithuba lesibini kwaye sineempumelelo ezimangalisayo kwiimakethe zase-US kwaye zifutshane emva koko kuwo onke amazwe.
Ziziphi izizathu zempumelelo? I-turinabol yokuqala iqala ukuphakamisa amandla. Okwesibini, njengoko kuye kwathiwa, i-turinabol yomlomo ishiya umzimba ngokukhawuleza kwaye ayifumaneki kumchamo kwiintsuku ze-6-8 emva kokuphela kokusetyenziswa. Asizange sivale malunga naluphi na uvavanyo lwe-doping lwe-turinabol. Nangona kunjalo, kunokuba kuba loo mvavanyo ingenziwa nje namhlanje.
Isici esifanelekileyo seziyobisi singathatyathwa njengokuba kunika ubunzima kwimisipha ngaphandle kokuqokelela kwamanzi. Amava abonisa ukuba ukusebenzisa i-turinabol kuphantse kufuneke kumacandelo okulungiselela ukhuphiswano. Kwakhona uhlangabezana nomsebenzi wokukhusela ubunzima bemisipha ngokutshabalalisa emva kokujikeleza.
Kukho omnye umxholo we-turinabol - yi-«ngesondo». Le steroid yandisa ngokukhawuleza i-libido yamadoda, ngamanye amaxesha kakhulu, ngoko umnqweno wesondo unqoba ngaphezu komnqweno wokuqeqesha Le propati, kunye nokukwazi nje ukuvimbela ukuveliswa kwe-testosterone engapheliyo, yenza ukuba izixhobo ezinobuncedo zithathe iimeko ezinomlinganiselo phakathi imijikelezo "enzima" ye-AAS yokugcina ngesondo.
I-turinabol yomlomo kunye noLawulo
I-turinabol yomlomo inomlinganiselo ophantsi we-androgenic we-6 kunye nokulinganiswa kwamandla e-anabolic we-53, oku kwenza kusondele ukugqibekisa ngokumalinganisa nemiphumo emibi kunye nokuzuza. Ngenxa yokulinganiswa kwe-androgenic ephantsi, i-acne, ubugwenxa, ukunyuka komsindo kunye nokwanda kwamandla ayinqabile, kodwa ayikho. Ukuthelekiswa nehomoni yomzali wayo u-Dianabol, i-anabolic ebuthakathaka kunye nabasebenzi bomzimba abayiboni i-Oral Tbol njenge-agent gaining agent.
Ncoma udoti lwe-turinabol yomlomo
I-turinabol yomlomo ene-half-grade ye-anabolic ye-Testosterone, ngoko ke into ephakanyisiweyo yokuphakanyiswa kwe-turinabol yomlomo iluhlu lwe-20-40mg ngosuku. I-turinaboldosages yomlomo ingadlulela i-40-80mg ngosuku, kodwa i-bodybuilders zibika ngemiphumo emibi iqala ukunyuka, ngelixa ukuzuza kuqhubeka.
Umlinganiselo wezonyango we-turinabol yomlomo
Izifo zonyango lwe-turinabol yomlomo zizungeze i-5-10mg ngosuku kwaye zanikwa abo abanezifo ezinokutshabalalisa izifo. Amanqanaba ezonyango ezonyango aqala kwi-1mg ngosuku kwaye angadlula i-2.5mg nsuku zonke (QC).
Isisombululo se-turinabol yomlomo sokwakha umzimba
Isisombululo sokuqala se-turinabol isisombululo ku-20-40mg ngosuku.
Abasebenzisi abaphakathi bangasebenzisa i-40-60mg imihla ngemihla.
Abafundi bomzimba ophezulu kunye nabaqeqeshiweyo bangasebenzisa i-80mg ngosuku, ungcono kangcono ngaphezu kwe-80mg / ngosuku, nangona kunjalo, ezi ziphumo ezingaphezulu kakhulu zingabangela imiphumo emibi kunye nezinye i-androgens zingasetyenziselwa ukuzuza okungcono.
I-Oral Turinabol Yowesifazana?
Iimbaleki zabasetyhini baseMpuma Jamani zithathe i-OT kwi-5-15 mg ngosuku kangangeeveki ezimbini ukuya kwezintandathu ngexesha. Ngaphandle kwento ebonakalayo ebonakalayo, uninzi lwaba bafazi babafazi banesifo sesibindi, isifo sentliziyo, ukungachumi, imicimbi yengqondo, kunye nokufa. I-Oral Turinabol ibonakalisiwe ukuba ayinayo i-anabolic steroid ekhuselekileyo yabasetyhini. Anditsho ukuba ezi ziphumo azinakuphepheka, kodwa endaweni yoko kukuba kuyinyani eqinisekisiweyo yokuba inqanaba lezi ziphumo zibaluleke kakhulu.Ngoko ke asiyincomi into yokuba abantu basetyhini bathathe eli chiza.
I-Turinabol Imijikelezo kunye nokuSebenza (ukubhekisela kuphela)
Umjikelezo we-Oral Turinabol
Kufuneka kuqatshelwe ukuba akunakwenzeka ukugqiba isilinganisi esilungileyo ngaphandle kweminatha kwizalathisi zomzimba zomdlali, amava akhe ekusebenziseni i-anabolic kunye ne-androgenic steroids, iinjongo zakhe eziphambili kunye nezinye izinto.
Ukubethelwa kwe-turinabol yomlomo
Kukulungele abantu abasebenzayo bezemidlalo, abaphathi bamandla okanye abakhi bomzimba ekunqumeni izitya. Kodwa ukuba i-fat fat-burn burn required, ayiyi kukunceda kuba i-steroid, ayiyiyo i-fat burner-burner.
I-1) I-Turanabol 35 mg / ED iiveki ezintathu ekupheleni komjikelezo we-deca-dianabol-testosterone ukwenza uncedo
I-2) I-Turanabol 50 mg / ED yeeveki ze-6 kunye neParololan (200 mg / w) kunye / okanye iStananol (150 mg / w) ekupheleni komjikelo weeveki ze-2-3 (mhlawumbi ukususela ekuqaleni komjikelezo)
3) Umjikelezo we-Turanbol umgangatho we-50 mg / ED kwiiveki ze-6. Ubunzima obunzima / obungaphambili bokuncintisana.
4) Ngethuba lokulungisa i-turinabol idla ngokuhlanganiswa ne-trenbolone, i-oxandrolone okanye i-stanozolol. Iziphumo ezilungileyo kakhulu zifumaneka ngokudibene ne testosterone propionate.
5) Ukudibanisa komlomo we-turinabol + oxandrolone inamandla kakhulu, kunokunconywa kuphela kubafazi.
I-6) Ungasebenzisa umlomo kunye ne-injini ye-turinabol ngexesha lomjikelo wokufumana ubunzima kwiintlobo ezahlukeneyo, umzekelo nge testosterone, nandrolone okanye ukudibanisa kwayo, endaweni ye-methandrostenolone (dianabol). Kunconywa kubadlali abafuna ukufumana imisipha emgangathweni.
I-PCT iyadingeka emva kweeninzi zezi zifundo.
I-turinabol yomlomo yobomi besiqingatha
Isiqingatha-zobomi be-turinabol yomlomo kwiincwadi zenzululwazi emva kolawulo lwe-IV ngamaxesha e-16; Nangona kunjalo, i-turinabol yomlomo wesiqingatha-bomi ayikho into efanayo. Ngokuqhelekileyo isigamu sempilo yokulawula ngomlomo sikhulu kunokuba kulawulo lwe-IV, nangona kunjalo, kule ngxaki ingaba yifutshane ngenxa yokudlula kokuqala kwe-metabolism kunye nokunciphisa izinga eliphezulu le-plasma xa kuthelekiswa ne-IV dose. Olunye iphepha luchaza i-half-short-life life short. Uqikelelo olungileyo ubuncinane ubuncinane kwiiyure ezisibhozo kwi-half-life of this steroid kunye nexabiso elibonakalayo phakathi kwe12 kunye neeyure ze-20. Inyaniso yokuba i-metabolites yeli steroid ingafumaneka kwixesha elide emva kokuphelelwa yisikhathi kubangele ixesha elide.
Iimiphumo eziphambili ze-turinabol yomlomo
I-Turinabol yaziwa njengenye yezona zinto zincinci anabolic steroids, ngokuqhelekileyo kufakwe kwicandelo elinye Anavar kwaye Primobolan.Ukusebenzisa le steroid akusayi kuchaphazela amanqanaba akho e-estrogen, ngoko ke enye ye-steroids ephephile kubasebenzisi besetyhini.
Ngexesha elikhuselekileyo kunokuba ezininzi i-steroids, usebenzisa i-Oral turinabol yomlomo ayikho ingozi. Nazi ezinye zeempembelelo ezichaphazelekayo ze-oral turinabol ongayifumana nayo:
Ukuncitshiswa kwemveliso yendalo ye testosterone
Ukwandiswa kwe-LDL (okubi) i-cholesterol
Ukunciphisa i-HDL (enhle) ye-cholesterol
Imiba yesondlo / Inani elincinci lobisi
Ukunyuka kwengcinezelo esibindi
Ukulahleka kweenwele ezinokwenzeka
Ukwanda kweenwele zomzimba
Kungenxa yokuba i-steroid inokubangela ukuba iziphumo zempembelelo ayithethi ukuba uya kubafumana. Sonke sisabela kwiziyobisi kunye namayeza ngokuhlukileyo.
Ukunciphisa iTettosterone yeNdalo
Njengama-anabolic steroids amaninzi, ukusebenzisa kwabo kungaholela kumzimba wakho ukuvelisa i-testosterone encinane. Ngamanye amaxesha amanqanaba akho aya kubuya ejwayelekile emva kokuba umjikelezo we-steroid uphele, kodwa oku akusoloko kunjalo.
I-testosterone ephantsi ingakhokelela kwimibandela enemiba kuquka ukunyuka kwamafutha omzimba kunye nobunzima obungaphantsi. Unokudibana kunye neengxaki zesini, ezifana ne-libido esezantsi kunye nemveliso yesityalo esezantsi.
Iimpembelelo kwiCholesterol yakho
Ukusebenzisa i-turinabol yomlomo kungabangela ukwanda kwe-LDL cholesterol kunye ne-HDL ye-cholesterol engezantsi. Oku kunokunyusa inani lepali egcinwe kwiiyeriyeri zakho, ezinokubangela iingxaki ezinjenge-heart attack and stroke.
Ukuba okwangoku uhlupheka kwizinga eliphezulu le-cholesterol ke usebenzisa i-anabolic steroid ayicebisi.
Unokunciphisa ingozi ngokusebenzisa amanyathelo alandelayo:
Ukutya amaninzi eentlanzi (i-omega-3 i-fatty acids)
Isongezelelo ngeoli yeentlanzi
Ukunciphisa ukungenisa kwakho amanqatha amaninzi
Ukunciphisa ukungenisa kwakho ushukela
Jonga i-cholesterol yakho
Musa ukuxhasana nezinye i-steroids zomlomo
Ingozi eyandayo yokulimala kwesibindi
Uninzi lwe-anabolic steroids yi-hepatotoxic, kwaye i-Oral turinabol ayikho into eyahlukileyo. Ukusebenzisa oko kunokunyusa ubungakanani bexinzelelo kwisibindi sakho. Oku akuthethi ukuba uya kubonakalisa isibindi sakho ngokusebenzisa kwayo, kodwa ukuba ungenayo isibindi esilungileyo ukuqala ngoko le steroid iyakuthinteka. ukuchitha utywala obuninzi, kunye nokuqinisekisa ukuba imijikelezo yakho ayidluli ixesha eliphakanyisiweyo.
Ukuthenga i-turinabol yomlomo
phi ukuthenga i-Oral turinabol powder?Ukuba unquma ukuthenga i-powder yomlomo weTurinabol, ungena kwimarike ehluke ngokufanelekileyo. Ungathenga iimveliso ngokuthe ngqo kwindawo ekuthengiswa kuyo iziyobisi, kwaye unoku-odolwa kwi-intanethi ngomlomo iTurinabol, inguqulelo yaselabhoratri yangaphantsi iyafumaneka, xa kuthelekiswa nevenkile yeziko, ukuthengwa kwe-intanethi ngomlomo ngomgubo weTurinabol powder kuyakhawuleza kwaye kulula, ukukhetha kunamandla, kodwa isiseko nguwe ube nomthengisi othembekileyo wexesha elide, ukuba sele unomboneleli onokuthenjwa, ngoko ke ndiyavuyisana nawe, ukuba akunjalo, i-AAS mhlawumbi lukhetho lwakho olulungileyo.
Indlela yokwenza i-levitra isebenze ngakumbi	Viagra? Yonke into malunga noTywala yaseFlibanserin